Daadad lixaadleh oo ku soo rogmaday tuulada Gosol ee degmada Xarfo oo qariyey dhismayaashii iyo dadkii oo bannaanka uga qaxay. – Radio Daljir
Daadad lixaadleh oo ku soo rogmaday tuulada Gosol ee degmada Xarfo oo qariyey dhismayaashii iyo dadkii oo bannaanka uga qaxay.
Xarfo, May 19 – Wararka ka imaanaya tuulada Gosol oo ka tirsan degmada Xarfo ee gobolka Mudug ayaa sheegaya gabi ahaanba tuuladaasi ay dul-mareen daadad lixaad leh oo ka soo rogmaday roobab mihigaan oo dhawrkii maalmood ee ugu dambeeyey ka da’ayey Nugaal iyo dhulka hawdka ah ee Puntland.
Wararku waxay intaasi ku darayaan dhsimayaashii tuuladaasi intii ugu dambaysay in ay qarsoomeen shlay galab goor-gaaban, dhammaanba ay biyuhu korka sare ka hareenyeen sida uu Radio Daljir u sheegay guddoomiyaha degmada Xarfo C/llaahi Faarax Bayle ‘Takarooni’
Guddoomiyuhu, waxaa uu sheegay wali in aan la soo sheegin wax khasaare nafeed, hase ahaatee dhammaan hantidii ma guudhada ahayd iyo middii kale ee tuuladaasi Gosol in ay cagta mariyeen daadka xad-dhaaf ah oo tuuladaasi ku soo burqaday.
Dadkii degganaa Gosol, ayaa lagu soo warramayaa dhammaantood in ay haatan yuururaan dhul cidla ah, gaar ahaan meelaha is-dheerayska ah iyo buuraha tuuladaasi ku dhaw, si ay uga maataan daadadka halkaasi ku soo jabay.
Maamulka gobolka Mudug iyo midka degmada Xarfo oo ay hoos timaado tuuladaasi ayaa ku hawlan qorshayaal loogu gurmadayo dadka daadadkaasi ay barakiciyeen, waxaana la filayaa halkaasi in ay u ambabaxaan wafuud kala duwani.
Waa markii labaad oo sidaan oo kale daadad u harqiyaan tuulada Gosol ee gobolka Mudug, waxaana ay ahayd sannadkii 2010-ka markii sidaan oo kale daadad soo rogmaday ay burburiyeen illaa iyo 32 guri oo tuuladaasi ku yaallay.